Puntland oo sheegtay in aysan aqbali doonin natiijada shirka Qaran ee maanta Muqdisho ka furmay – Radio Daljir
Seteembar 2, 2013 7:00 b 0
Garoowe, September 2, 2013 – Dowladda Puntland ayaa maanta qaadacday shirweynaha Qaran ee dib u heshiisiinta iyo mustaqbalka dalka ee ka furmay Muqdisho, arrintaas ayaa daba socota xili Puntland ay xiriirka u jartay dowladda dhexe dhamaadkii Agoosto.
Wasiirka warfaafinta Puntland Axmed Sheikh Jaamac oo shir jaraa?id maanta ku qabtay Garoowe, ?ayaa sheegay in aysan jirin wax masuuliyiin ah oo Puntland metelaya oo shirkaas ka qeyb-galaya, isla markaasna aysan ogolayn qoddobada ka soo baxa shirka.
Wasiirka maaliyada ee Soomaaliya Faarax Cali shire oo isna shirka jaraa?id ka hadlay, waxaa uu sheegay in aan shirkaas lagu tilmaami karin Shirweyne Qaran, mudane Faarax wuxuu xusay in aysan dowladda dhexe fulin nidaamkii Federaalismka, isla markaasna ay Dastuurka ku tumatay.
Axmed Sheikh Jaamac wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ku cel-celiyey in aysan Puntland aqbali doonin qodobada ka soo baxa shirka ka dhacaya Maanta Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shirka furay, waxaana la xaqiijiyey in ay joogaan maamulladda gobollada Bay, shabeelaha dhexe iyo shabeelaha Hoose, sidoo kale waxaa la xaqiijiyey maamulka Galmudug oo shirka goob joog ka ah.